Helidda daryeelka caafimaadka dhimirka ee ilmaha | Suomen Mielenterveysseura
Daryeelka caafimaadka qoyska waxay bixiyaan caawimo marka qoyska ama ilmaha ay la kulmaan dhibaato caafimaadka dhimirka. Qeybta caafimaadka qoysku waa adeeg sharci ah oo loogu talogalay dhammaan dadka deegaanka deggan.
Qeybta caafimaadka qoyska waxaa loogu talogalay ilmaha, dhalinta iyo latalinta qoyska, sidoo kale la socodka caafimaadka bulshadda iyo helidda khibradaha arrimahaas quseeya. Adeega deegaanada kala duwan ay bixiyaan faraq ayaa u dhaxeeya. Akhbaaraha cusub ee adeega qeybta caafimaadka qoyska deegaankaaga waxaad ka heli kartaa shabakadda internetka ee deegaanka.
Lataliyaha caafimaadka dhimirka ilmaha wuxuu kaalmeeyaa ilmaha qaba dhibaatooyinka soo socda:
dhibaatooyin la xiriira dhaqanka dadka ee xanaanada caruurta ama iskoolka
degenaan la’aan iyo dareemid ciriiri
cunto xumo ama jiif xumo
Qeybta caafimaadka khaaska ah ee dhimirka ilmaha waxaa lagu heli karaa in takhtarka iskoolka ama kan xarunta caafimaadka in uu ilmaha qeybtaas u soo diro. Qeybta caafimaadka dhimirka ee caruurta ula-jeedadeedu waa inay sugto koriinka caadiga ah ee ilmaha sidoo kale inay kaalmeyso qoyska. Haddii waalidku ay ka welwelaan caafimaadka ilmaha way codsan karaan daryeelkan.
Qeybta caafimaadka qaaska ah ee dhimirka ilmaha xanuunka ilmaha waxaa loo baaraa si ku haboon koriinka ilmaha. Arrimaha qaar waxaa laga yaabaa in ay yihiin kuwo la xiriira da’da ilmaha ee xiligaas waxayna noqon karaan kuwo caadi ah, waxaase laga yaabaa in da’a kale ay noqdaan kuwo dhibaato ah.
Ilmaha waxaa baara khabiiro kala duwan sida, takhtar, lataliyaha caafimaadka ilmaha, shaqaalaha arrimaha bulshadda ama kal-kaaliye caafimaad. Xaaladda nolosha ilmaha waxaa lagu sameynayaa deraasaad iyadoo qoyska oo idil la wareysanayo.
Ilmaha laftiisa wareysi ayaa lala yeelanayaa iyadoo la eegayo da’da iyo garaadkiisa, wareysiguna wuxuu noqon karaa tusaale in la eego habka uu ilmuhu u ciyaarayo. Haddii loo baahdana caafimaadka kale ee ilma baadhitaan ayaa lagu sameyn karaa. Waxaana la xaqiijinayaa in ilmuhu uusan qabin xanuun dhinaca maskaxda ah kaasoo sababi kara dhibaato.
Daryeelka caafimaadka dhimirka ee ilmuhu wuxuu ka kooban yahay daryeelo isku dhafan
Daryeelka dhimirka ee ilmuhu wuxuu ku saleysan yahay ilmaha iyo kolba xaaladdiisa. Daryeelku wuxuu tusaale noqon kartaa mid maskaxiyan ah, mid la xiriirta ilmaha iyo xaaladdiisa, mid la xiriirta qoyska iyo xiriirkiisa ama mid haddii loo baahdo daaweyn ah. Caadi ahaan daryeelku wuxuu ka kooban yahay daryeelo kala duwan oo la isu geeyey.
Daryeelka dhimirka ilmuhu wuxuu kaloo sida baadhitaan lagu ogaaday ka hortagayaa dhibaatooyinka kale ee dhinaca da’da ilmaha la xiriira. Daryeel la’aanta dhibaatadan waxay keeni kartaa xaaladda oo sii adkaata siina dheeraata.
Telefoonka kaalmadiisa waxaa loogu talagalay inuu fududeeyo dareenka iyo xaaladda qofka iyadoo qofku uu helayo inuu la hadlo dad ka dhageysanaya xaaladiisa iyo dhibaatooyinkiisa si dhageysi iyo caawimo leh.
Lacagta telefoonkan arimaha dhibaatooyinka ee wadanka waa mid la mid ah tan guryaha sidoo kale haddii la isticmaalo telefoonka gacanta waxay ku xirantahay khidmada adeeg bixiyaha.
Qiimihu wuxuu ku xiranyahay kolba shirkada telefoonka khidmadeeda. Qiimuhuna waa mid ka imanaya dhinaca shirkada. Xarunta SOS ee arimaha dhibaatooyinka telefoonkeedu waa lacag la’aan.